आगम्छे बनाउन विदेशीलाई नदिइने- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २५, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — हनुमानढोका दरबारभित्रको गोप्य मन्दिरमध्येमा पर्ने आगम्छे निर्माण गर्न अब विदेशीलाई नदिइने भएको छ । पुरातत्त्व विभागले जापानलाई दिने तयार पारेको आगम्छेको सम्पदा अभियन्ता, जनप्रतिनिधि लगायतको विरोध भएपछि विभाग पछि हटेको हो ।
शाहवंशभरि बन्द भएको आगम्छे मन्दिर । तस्बिर : दामोदर
जापानले यसका लागि अनुदानसमेत दिइसकेको थियो । अनुदान दिए पनि आफूले चाहेको एक एनजीओलाई निर्माण गर्न दिने विषयमा कुरा नमिलेपछि जाइकालाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
मल्ल राजाको कुलदेवताका रूपमा पुजिंदै आएको आगम्छे शाहवंश सुरु भएपछि बन्द गरिएको थियो । अरूको धार्मिक भावनाको कदर गर्दै शाहहरूले यो मन्दिर टेकेनन् । यस्तो सम्मानका साथ राखिएको मन्दिर बनाउन विदेशीलाई दिने तयारी भएको थियो । विरोध भएपछि सम्पदा अभियन्ता, स्थानीयवासीलगायतलाई मनाउने उद्देश्यले पुरातत्त्व विभागमा बैठक राखिएको थियो ।
बैठकका सहभागीलाई मनाउने कोसिस महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले गरेका थिए । ‘विदेशीलाई छिर्न दिने होइन,’ दाहालले भने, ‘बनाउने हाम्रै मान्छेले हो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा जापानी प्राविधिक मन्दिरभित्र जान्छौं भनेका थिए । तर हामीले दिएनौं । चाँगुनारायण र शान्तिपुर पनि यस्तै गोप्य मन्दिर हुन् । ती मन्दिरमा पनि हामीले त्यहींका पुजारी परिवारलाई बनाउने जिम्मा दियौं । यहाँ पनि गर्ने त्यही हो ।’
दाहालको आश्वासनमा सम्पदाप्रेमी सहमत भएनन् । ‘नौतले दरबारमा पनि हाम्रै प्राविधिकले बनाउने भनिएको थियो,’ सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समिति संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘सुरुमा त्यसो भन्ने मात्रै हो । अहिले जुद्ध सालिकदेखि चीनको झन्डा गाडिएको छ । गद्दी बैठक अमेरिकाले रेट्रोफिटिङ गर्‍यो । त्यहाँ पनि अमेरिकाकै झन्डा फहरायो । अब हामी आगम्छेमा जापानको झन्डा फहराउन दिंदैनौं ।’
प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले पनि गोप्य मन्दिर विदेशीलाई दिने पुरातत्त्वको योजनामा असहमति जनाए । ‘हामीले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताले आफ्नो सम्पदा बनाउन विदेशी गुहार्नु हुँदैन भनेका छन् । आगम्छेको धेरै महत्त्व छ । छोरीको बिहे गरेको छ भने आगम्छेमा पस्न पाइँदैन । त्यति कडा नियम हुन्छ । म ४५ वर्षको भएँ । तर अझै म आगम्छेमा छिरेको छैन । किनभने म दीक्षित भएको छैन ।’
विदेशीलाई बनाउन नदिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘हामीले रद्द गर्न सक्दैनौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यहाँ भएको निर्णय मन्त्रालय पठाइदिन्छौं ।’
यसको जीर्णाेद्धार हनुमानढोका दरबारबार हेरचाह अड्डा र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । दाहालका अनुसार जापानले दुई मन्दिरका लागि ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । आगम्छेको लागि १३ करोड रुपैयाँ र पाटनको देगु तलेजुका लागि २० करोड छुट्याइएको छ । हनुमानढोका दरबारको पछाडि पर्छ आगम्छे । लामो बार्दली भएको घर छ । त्यसको माथिल्लो तलामा छ आगम्छे । पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्कीका अनुसार तलको दुई तला चन्द्रशमशेरले निओ क्लासिकल शैलीको बनाए । माथिल्लो तला आगम्छे भने मल्लकालीन शैलीमै छ ।
इतिहासकार गौतमवज्र वज्राचार्यका अनुसार यस मन्दिरभित्र मल्ल राजाहरूले गुप्त तरिकाले पूजा गरिने आगम देवता स्थापना गरिएका छन् । आगम्छेमा आफ्ना वंशबाहेक अरू छिर्न नमिल्ने कडा नियम बनाइएको हुन्छ ।
आफ्नो वंशका बाहेक अरू छिर्न नपाउने नियम भएकै कारण शाहवंश सुरु हुनासाथ यो मन्दिर बन्द भएको वज्राचार्य बताउँछन् । पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १९२६ मा कान्तिपुर विजय गरेका थिए । कान्तिपुर विजय गरेपछि मसानचोक छेउमा बसेका थिए । पछि नौतले दरबार बनाएर सरेका थिए । नेपाल एकीकरण गरेपछि यहाँ प्रचलित सबै परम्परालाई पृथ्वीनारायण शाहले अंगीकार गरेका थिए । आगम्छेमा नछिर्ने, कुमारी रथयात्रालाई निरन्तरता दिनेलगायत सांस्कृतिक क्रियाकलापमा कुनै बाधा गरेका थिएनन् । आफ्ना कुनै संस्कृतिमा हस्तक्षेत्र नगरेकै कारण यहाँका नेवार समुदायले शासन सत्ता परिवर्तनलाई सजिलै स्वीकारेको इतिहासकार बताउँछन् ।
यसको निर्माण प्रताप मल्लले गरेका थिए । शाहकालमा भित्र नछिरे पनि बाहिर भागमा भने शाहवंशमा पनि केही काम भएका थिए । यस मन्दिरको बुइँगलको सानो घण्टामा अभिलेख पनि छ । अभिलेखअनुसार यसमा घण्टा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह र सुवर्णप्रभावदेवीले वि.सं. १८५७ मा चढाएका थिए ।
मन्दिरका टुँडाल पनि कलाकृतिले भरिएका छन् । यहाँ शैव सम्प्रदायका देवीदेवताको चित्र अंकित छन् । मन्दिरका केही थप विशेषता छन्, जुन धेरै मन्दिरमा छैनन् । छानाको कुनाकुनामा कुँपा बनाइएका छन् । कुँपाको स्वरूप मयूरको जस्तो छ । छानाको मुनि चार सुरमा दुई–दुईवटा कुँसल जोडिएका छन् । मन्दिरको टुप्पाको गजुर पनि विशेष किसिमको छ । गजुर कलशको आकारको छ । धातुको सानो देवल जस्तो पनि देखिन्छ गजुर । यस्तो गजुर पनि मन्दिरमा बिरलै भेटिन्छ । पाटनको कृष्ण मन्दिरमा यस्तै गजुर प्रयोग भएको छ । सम्भवत: यस्तो गजुर कृष्ण मन्दिर र आगम्छे मात्रै छ ।
गोप्य मन्दिरलाई बनाउन विदेशीलाई दिन नहुने स्थानीयको मागलाई सरकारले सुनेको छैन । हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका अनुसार आगम्छे, जगन्नाथ र शिव मन्दिर गोप्य मन्दिर हुन् । यहाँ तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिन्छ । यो मन्दिरमा मल्ल राजाका सबैभन्दा पुरानो अभिलेख छ । यहाँ महेन्द्र मल्लको वि.सं १६१९ को अभिलेख छ । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न र अनिरुद्र गरी चार देवताको संयुक्त मूर्ति छ यहाँ । यी चारै देवताको संयुक्त रूपलाई चतुर्मूर्ति विष्णु भनेर चिनिएका छन् । मूर्ति प्रस्तरको हो ।
मन्दिरको भित्रको भित्तामा जगन्नाथ, शुभद्रा र बलरामको मूर्ति छ । दुईतले यो मन्दिरमा तल्लो तलामा चारैतिर लहरै ३/३ ढोका छन् । ती तीनमुखेमध्ये बीचको ढोका काठको खापा हालेर खोल्न नमिल्ने बनाइएको छ । अरू दुई ढोका वज्र लगाएर टालिएका छन् । बीचको ढोकाको खापामा महादेवको चिह्न राखिएका छन् । त्रिशूल र तीन आँखा बनाएर महादेवको चित्र अंकित गरिएका छन् । टालिएका ढोकामा तीनकुने विवर राखिएका छन् ।
विवरलाई शाक्त समुदायको देवीको प्रतीक मानिन्छ । यो मन्दिर स्त्री र पुरुषको रतिलीला भएको मन्दिरका रूपमा पनि प्रख्यात छ । वैष्णव र शैव सम्प्रदायका देवता र तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिने मन्दिरमा यस्ता रतिलीलाका काष्ठकला देखाइएका हुन्छन् । मन्दिरमा वज्र नपरोस् र भूतप्रेतलगायतले दु:ख नदिऊन् भनेर यस्ता चित्र बनाउने गरिएको हो ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:०३
‘दोषीलाई कारबाही मागसहित पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ’
चितवन — सर्पले टोकेर ३ वर्षीय बालकको उपचार हुन नसकेको विषयमा अस्पतालहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै आइतबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रजिअ बस्नेतले पनि यस्तो खालको कमजोरी क्षम्य नहुने भएकाले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने वचन दिए । भरतपुर १५, मंगलपुरका ३ वर्षीय सलिन विकलाई बुधबार राति करेत सर्पले टोकेपछि उनका कान्छा हजुरबुबाले भरतपुर अस्पताल पुर्‍याएका थिए । बिरामीलाई दिने सुई भए पनि पीआईसीयू नभएको भन्दै शिक्षण अस्पतालमा जान भनिएको थियो ।
भरतपुरका २ शिक्षण अस्पताल र अन्य २ निजी अस्पताल जाँदा पनि बच्चा भर्ना गरिएन । अन्तिममा फर्केर भरतपुर अस्पतालमै आए पनि बच्चालाई बचाउन सकिएको थिएन । ‘यस्तो सुगम जिल्लामा यस्तो घटना हुन्छ भने दुर्गमको अवस्था के होला ? अस्पतालले बाँच्ने ग्यारेन्टी भएका वा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र उपचार गर्न खोजेको हो,’ ज्ञापनपत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।
नाफा मात्र लिन खोलिएका अस्पतालका कारण यस्तो भएको हुँदा छानबिन समिति बनाएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष विष्णु भुसालले माग गरे । मञ्चले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ । पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि जोड दिएको भुसालले बताए । पीडित परिवारले पनि आइतबार प्रजिअ र अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टलाई भेटेका छन् ।
‘हामीले प्रजिअ र अस्पतालका मेसु भेटेर कुरा राखेका छौं । २ दिनमा मागअनुसार कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ,’ मृतकका हजुरबुबा बलराम विकले भने ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:०१
सहकारीले सुरु गर्‍यो पेट्रोल पम्प
कान्ति लोकपथ सञ्चालन हुँदै
भोगचलन नगरेको जग्गाको कर